Ururka Al-Islax oo laga garab u qeybsamey – idalenews.com
Sida lagu sheegay bayaan maanta ka soo baxay ururka Al-Islaax ee Soomaaliya oo ah urur ka tirsan Shabakada Ikhwaanul Muslimiin ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku cadeeyeen inay ururkooda ka casileen illaa saddex masuul oo sare oo ururka ka tirsanaa mudo dheer.
Bayaanka ka soo baxay Xarakada Al-Islaax oo nuqul ka mid ah ay heshey Idale News Online (INO) ayaa waxaa ku saxiixnaa Sheekh Maxamed Axmed Garyare oo ah aas aasaha ururka, waxaana lagu sheegay bayaanka in guddi xaqooqo raadin ah oo ururku u saaray mashaakil ka dhexjira ay soo jeediyeen casilaada shakhsiyaadkaasi.
Dhanka kale Garabka Xilka laga qaadey ee Ururka Al-Islaax oo ka mid ah Ururada Islaamiga ayaa isna bayaan uu maanta soo saaray kaga jawaabay hadal ka soo yeeray Sheekh Maxamed Axmed Nuur (Garyare) oo ahaa inay xilka ka qaadeen Gudoomiyaha Ururka Islaax iyo xubno kale, kadib markii uu ku eedeeyay inay baal mareen xeerarkii u yaalay ururka.
Bayaanka Xarakada Islaax oo uu ku saxiixnaa Cali Baashi Cumar Xaaji ayaa lagu sheegay in Ururka Islaax uu leeyahay hogaan maamul iyo shuruuc kala hagta howlihiisa, isla markaana ay keentay in Ururka uu noqdo mid ku caan baxay kala dambeyn iyo waxqabad mudadii 34-ta sano uu jiray.
“Waxaa layaab ku noqotay dhammaan xubnaha ururka iyo maamulladiisa kala duwan wargeysigii uu laanta afka Soomaaliga ee BBC-da siiyay Sheekh Maxamed Axmed Nuur taariikhdu markay ahayd 23-kii Luuliyo 2012; kuna sheegay inuu kala diray mas’uuliyiinta iyo golayaasha ururka, isaguna iskiis isugu magacaabay inuu yahay madaxa KMG ah ee ururka,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay Islaax”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Xarunta Dugsiga Sare ee Scuola Polizia oo uu ka furmey Shirkii Ansixinta Dastuurka